16 Sanno Ka Dib Dortmund Oo Gaartay Finalka UCL Inkastoo Guuldarro Cabsi U Laheyd Ay Ka Soo Gaartay Real Madrid. - iftineducation.com
iftineducation.com – 16 sannadood ka dib Borussia Dortmund ayaa iska xaadirisay finalka Champions League ka dib markii ay ku dardareen wadar ahaan labadii lug ee semi-finalka kooxda Real Madrid 4-3, iyadoo lugtii labaad ee caawa ka dhacday Santiago Bernabeu ay si diriqi ah ku badbaadeen madaama guuldarro 2-0 ah ay ku soo gaartay Santiago Bernabeu.
Dortmund oo hal lug kula jirtay finalka Wembley ka dib markii ay 4-3 ku soo badiyeen lugtii hore ee Jarmalka ka dhacday ayaa haatana xaqiijssatay inay si fudud ugu safreyso London 25ka bisha May, madaama ay ciyaar adag ka dib guuldarro 2-0 kaga soo gaartay Santiago Bernabeu.
Fursadii ugu horeysay ee ciyaarta waxaa daqiiqadii 4aad heshay Real Madrid, Modric ayaa kubad u dhigay Ozil kaasoo isna u sii dhex bixiyay Higuain oo goolka u furnaa, laakiin dhameystirkiisa ayaa ka xumaaday taasoo keentay in goolhayaha Dortmund uu kubada ku badbaadiyo lugtiisa.
Afar daqiiqo ka dib Real Madrid ayaa fursad kale heshay, Di Maria ayaa dhanka midig kubada ugu baasay Ozil, kaasoo labo ciyaaryahan kubada ka leexsaday ka hor inta uusan u dhigin Ronaldo oo meel fiican u taagnaa goolka, laakiin darbadiisa waxa ay noqotay mid uu goolka dulmarsiiyo.
Mario Gotze oo dhaawac kaga baxay ciyaarta bilowgeedii.
Dortmund ayaana heshay daqiiqadii 13aad fursadoodii ugu horeysay, markii laad xor ah ay soo tuureen ay u saamaxday Lewandowski inuu ka dhuunto Ramos oo uu kubada sideeda kula qabto, laakiin goolhaye Lopez ayaa ka badbaadiyay.
Daqiiqadii ku xigtay Ronaldo ayaa fursad fiican helay ka dib markii kubad dheer loo soo qaaday, isagoo xabadka ku koontaroolay islamarkaana uu goolka ka xigay kaliya goolhayaha, laakiin goolhayaha Dortmund Weidenfeller ayaa si fantastik ah kaga badbaadiyay Ronaldo kubadaas dahabiga aheyd.
Ronaldo oo fursad fantastik ah uu ka badbaadiyay goolhaye Weidenfeller
Iyadoo Dortmund auu dhaawac kaga baxay Gotze, hadana jamaahiirta Los Blancos ayay aheyd kuwii madaxa qabsaday daqiiqadii 15aad ee ciyarta markii Ozil kubad fiican loo dhex bixiyay, isagoo fursad u heysta inuu siduu doono u dhaliyo ama u dhigo Di Maria oo u furnaa goolka ayuu goolka banaankeeda mariyay.
Seddexdaas fursad ee goolka loo fishay ee ay iska qasaarisay Los Blancos iyo fursadii Lewandowski ka dib waxaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah, taasoo ay ku faraxsaneyd kooxda Jarmalka.
Sergio Ramos iyo Robert Lowendowski oo xamaasada ciyaarta ay qaaday.
Daqiiqadii 48aad ayaa Lewandowski uu helay fursad fiican, iyadoo kubad loogu dhiibay xerada goolka dhexdiisa, laalkiin darbadii uu goolka la beegsan lahaa waxa ay dulmartay goolka dushiisa.
Daqiiqad ka dib marka Dortmund ayaa fursad heshay, Gundogan ayaa kubad u soo celiyay BVB isagoo u dhiibay Reus kaasoo quudiyay Lewandowski oo fursad fiican ku heystay goolka, waxaana kuu tuuray darbo xoogan, laakiin birta ayaa ka beenisay.
Bilowgii qeybta labaadna fursadaha waxa iska heleysay Dortmund oo fursad dahabi ah ay soo martay daqiiqadii 62aad markii Reus uu kubad baas ah uu ka keenay dhanka midig isagoo u dhigay Gundogan oo hortaagaan goolka hortiisa, waxaana ciyaaryahanka khadka dhexe uu heystay gool banaan, laakiin Diego Lopez ayaa shaqo wacan qabtay oo si fantastik ah u badbaadiyay.
Madrid ayaana markeeda fursad heshay daqiiqadii 70aad, Ozil ayaa kubad ugu dhigay xerada goolka horteeda Ronaldo, kaasoo isna si wacan kubada ugu qaaday goolka, laakiin waxa ay si ciriiri ah ku dulmartay goolka.
Lopez, Lowendowski iyo Varane oo daawanaya kubadii birta ay ka beenisay weeraryahanka Dortmund.
Real Madrid ayaana hogaanka u qabatay ciyaarta markii ugu horeysay daqiiqadii 82aad, Kaka ayaa kubad u dhigay Ozil kaasoo karoos ka keenay dhanka midig, waxaana kubad helay oo shabaqa dhex dhigay Karim Benzema.
Los Blancos ayaana bilowday markaas inay cadaadis saarto Dortmund si ay u helaan labada gool kale ee ka xigay inay gaaraan finalka Champions League. Goolhaye Weidenfeller ayaa fursad qatar aheyd ka badbaadiyay Benzema daqiiqadii 88aad kaaso darbo gantaal ah ka soo tuuray xerada goolka banaankeeda islamarkaana ciyaaryahan kale ay ku sii dhacday, laakiin inta aysan shabqa gelin waa goolka korkiisa ka bixiyay Weidenfeller.
Los Blancos ayaana islamarkii heshay goolka labaad ee ciyaarta oo si qurux badan u dhameystiray Sergio Ramos, taasoo ciyaarta u yeeshay dhamaad waali ah, madaama Real Madrid ay hal gool kaliya u jirtay inay gaarto finalka Champions League. Laakiin waa ay haleeli waayeen.
Waxaana ay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro 2-0 oo ay ku badisay Real Madrid, taasoo ka dhigeysa in Borussia Dortmund ay labada lug ee semi-finalka ku badisay 4-3, waxaana ay sidaasi ku xaqiijisteen booskooda finalka Champions League, iyagoo gaaray markii ugu horeysay 1997dii markaasoo ay ka qaadeen Juventus.
Waxaana halkaas ku soo gabagabowday riyadii Real Madrid ee xilli ciyaareedkan ee koobkoodii 10aad ee Champions League iyo hamigii macalinkodoa Jose Mourinho ee koobkiisii 3aad ee Champions League. Waana xilli ciyaareedkii 3aad ee Real Madrid lagu reebo semi-finalka, xilli ciyaareedkii horena waxaa ku reebtay koox Jarmal ah Bayern Munich.
Kooxda Dortmund oo weli dhinaca aan dhulka loo dhigin xilli ciyaareedkan Champions League ayaana finalka Wembley ka dhacaya 25ka bisha May waxa ay ku sugeysaa midkood Bayern Munich ama Barcelona.
Mourinho oo qirey in uu ka tagayo Real Madrid, kana cawday garsooraha (Daawo video)